Qaamuus - Wikipedia
Sidoo kale eeg: Insaykalobeedhiya
Noocyo kala duwan oo Qaamuus ah.
Qaamuus (Af Ingiriis : dictionary; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa ereyo badan oo la soo ururiyay kuwaasi oo luuqad (ama af) ku turjumaya luuqad kale. Sida caadiga ah, qaamuusku wuxuu u habaysan yahay nidaamka alifbeetka; taasi oo ka bilaabanta xarafka koowaad ee luuqadaasi.
Qorista iyo diyaarinta qaamuus waa shaqo aad u badan oo qaadata wakhti iyo maal; waxaana maanta dunida jira qaamuusyo badan oo isku fasira labo ama dhowr luuqadood. Tusaale ahaan, waxaa jira Qaamuuska Af Soomaaliga iy Ingiriiska, iyo kuwo kale oo badan.
Qaamuusku waa buug erayga ama luqadaha fasiro. Sidoo kale, waxoo kuu fasiraa ama kuu turjumaa, luqadaha kale. badanaa qaamuusyaasha waxaa lagu tixay, alifbeetada, si oo u fududaado, radinta xarafka aa raadineesid.
Sidoo kale fiiri bogagan
Qaamuus Soomaali-Ingriis-Soomaali Archived Agoosto 30, 2010 // Wayback Machine
Soomaali - Français - Soomaali
Qaamuus Soomaali - Français
Mohammed Ali Farah / Dietmar Heck Somali Wörterbuch Deutsch-Somali / Somali-Englisch-Deutsch Qaamus Jarmal-Soomaali Qaamus Soomaali-Ingiriis-Jarmal Mohammed Ali Farrah; Dietmar Heck © Helmut Buske Hamburg 1990/2009 (1990: ISBN 3-87118-939-1 2009: ISBN 978-3-87548-055-9. (www.buske.de)
soomali - Ingiriis - talyaani
qaamuus Af-esperanto - Af-soomali Archived Abriil 19, 2012 // Wayback Machine
ttt - www - Qaamuus/vortaro : www. reta-vortaro.de - 61 af
a, b, c, lernu.net (“Pri la Fundamento“) sawir/qaamuus "bildvortaro", vortaro (30 af /(lingvoj)) Archived Luuliyo 3, 2010 // Wayback Machine
qaamuus - sawir / qaamuus bildvortaro Archived Jannaayo 28, 2012 // Wayback Machine
Liland Brajant ROS Liland Brajant ROS’ - Qaamuuska Af-Soomaali- Af-Esiperaanto Archived Oktoobar 6, 2013 // Wayback Machine
Qaamuus: Krause Esperanto- Deutsch (Jarmal), © Helmut Buske Hamburg 1999 ISBN 3-87548-193-3 www.buske.de
Qaamuus,Krause Deutsch (Jarmal)-Esperanto © Helmut Buske Hamburg 2007 ISBN 978-3-87548-466-3 www.buske.de
Soomaali iyo 36 luqadood oo kale, arjiga bilaashka ah
↑ Webster's New World College Dictionary, Fourth Edition, 2002
↑ Nielsen, Sandro; The Effect of Lexicographical Information Costs on Dictionary Making and Use, Lexikos 18, issn 1684-4904, 170–189
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Qaamuus&oldid=237120"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Juun 2022, marka ee eheed 04:52.